ကြောငျးအတှကျကလေး၏အဆင်သင့် - စမ်းသပ်မှု, ကျောင်းများအတွက်ကလေး၏စေတနာ၏ရောဂါရှာဖွေရေး။ ကျောင်းကလေးတစ်ဦးပေးသောအခါ?
ကြောငျးအတှကျကလေး၏အဆင်သင့် - အားလုံးသောမိဘများမူကြိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်
အချို့ကလေးများစိတ်အားထက်သန်စွာက "ပထမဦးဆုံးခေါင်းလောင်း" စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်နှင့်အခြားအရှုပ်တော်ပုံဦးပထမဦးဆုံးတန်းကျောင်းသူလေးဖြစ်လာလိုသောမဟုတ်, မိဘကျေနပ်။ စနစ်တကျထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝအရည်အချင်းပြည့်မီကုသနှင့်ကလေးအထူးကု၏အကြံပေးချက်ကိုကူညီသင်ယူဖို့ကလေးကိုပြင်ဆင်ထားရန်။
ကလေးများအသိပညာရဖို့များအတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူပေး, ဉာဏဇီဝကမ္မနှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု၏သငျ့လျြောသောဖွဲ့စည်းခြင်း,, 6,7နှစ်ကဘဝကိုအကြားအရပ်ဌာနကြာပါသည်။ ကျောင်းကလေးသူငယ်အခပေးရပုံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသောအခါ, အလျင်စလိုဖို့မနှင့်ကြီးထွားဖို့မကြိုးစားဘူးသည် သာ. ကောင်း၏ " မဲနယ် ။ " 7-8 နှစ်က - သုတေသနကျွမ်းကျင်သူများကကျောင်းများမှစောလွန်းလည်ပတ်မှုလေးတွေ, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတနျးအတှကျအကောငျးဆုံးအသက်အရွယ်၏စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုကျန်းမာရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါကွဲပြားခြားနားသောကြိုးနှင့်ချည်နှောင်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုပြုမူနိုင်စွမ်း, ရေးဖို့ သို့မဟုတ် ဖတ် ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အလယ်တန်းပညာရေးရဲ့ start မရှိကြပေ။ ကြောငျးအတှကျကလေး၏အဆင်သင့်လိုအပ်ချက်အမြဲအောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်:
မိဘများမကြာခဏ ( "ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား၌သွန်သင်ပြီးစကားပြောပါလိမ့်မယ်") ဆရာ, ဆရာမအပေါ်တာဝန်ပြောင်းလဲ, ထိုစာရင်းပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမရှိခြင်းလစျြလြူရှု။ ဒါဟာဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျကြောငျးအတှကျအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ကလေး၏အသငျ့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ပဏာမစိစစ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်, အကောင့်ထဲသို့အထက်တွင်စံ၏အားလုံးယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ကသားသမီးရဲ့ကုထုံးမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်နှင့်အကူအညီများကိုရှာကွနိုင်ပါတယ်။
အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်, ကလေးကောင်းစွာစိတ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးရပါမည်။ ဒါဟာအချို့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏လုံလောက်သောအလုပ်လုပ်တဲ့ရင့်ကျက် presupposes ။ ကျောင်းကိုသူငယ်၏စေတနာ၏ညွှန်းကိန်းများသေချာပေါက်ထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်:
တစ်ဦးယုတ္တိ connection ကိုထူထောင်;
အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သူတို့ (ပေါင်းစပ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ထောက်လှမ်းအုပ်စု entity တ္ထု,
မိဘများ '' အခန်းတစ်ခန်းဖုန်းများ (optional ကို) ။
စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ကလေးများကသူတို့ကိုနှင့်အဖွဲ့သည်တစ်လုံးဝအသစ်နှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တက်အဆုံးသတ်, ဒါကြောင့်လက်ထောက်အခက်အခဲများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကျောင်းဖို့သူငယ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်သင့်အောက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်သာတည်သည်:
ကြောငျးအတှကျကလေး၏အသငျ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ထပ်ဆရာညွှန်ကြားချက်ကိုစုပ်ယူသည်ဆိတ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့အမှုတို့ကိုပြုသို့မဟုတ်တခြားနေရာသွားကြဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟုရင်တောင်သူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာနိုင်စွမ်းပါဝင်သည်။ ဤစည်းကမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးသည်တာဝန်သွန်သင်နှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် interaction က၏နားလည်မှုတိုးတက်စေရန်။
မကြာခဏဆိုသလိုဆင်းရဲသားကိုကျန်းမာရေးပြဿနာများကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ဗဟုသုတနှင့်ပျင်းရိခြင်း၏မရှိခြင်း။ အဲဒီမှာကလေးတွေပဲဖတ်ပါရန်သင်ယူနိုင်ဘူးသည့်အခါများစွာသောအမှုများကြောင့်အများဖြစ်ကြသည် dyslexia , ဒါပေမယ့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်မိဘများရောဂါလျစ်လျူရှု။ အဆုံးအဖြတ်ကြောငျးအတှကျကလေး၏အသငျ့စံ attribute တွေအစုတခုပေါ်ထွက်ယူသွားတတ်၏:
Spatial orientation ကိုပြင်ပေး;
ကြောငျးအတှကျ speech ကလေး၏အသငျ့
ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဆရာများ, နည်းပြနှင့်ရွယ်တူချင်းအတူတက်ကြွစွာဆက်သွယ်ရေးဆိပါဝငျသညျ။ သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုကကြိုတင်မဲအတွက်ကြောငျးအတှကျစကားအစိတ်အပိုင်းများကလေး၏အသငျ့အကဲဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်, လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေခဲ့:
တစ်ဦး monologue ပြောဆိုရန်စွမ်းရည်, ရွတ်ဆို။
ဒါဟာမဆိုမိန့်ခွန်းချို့ယွင်းချက်မိန့်ခွန်းကုထုံးနှင့်အိမ်ပြန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အကူအညီဖြင့်တညျ့ခဲ့ကြကြောင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကြောငျးအတှကျကလေး၏အသငျ့အပေါငျးတို့သအက္ခရာများ၏ပုံမှန်အသံထွက်, သူတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကလေးထွက်စကားပြောဖို့ဖတ်, ပြောဆိုရန်ရှက်ရွံ့ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံဤလှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ဖို့ဆင်းရဲသားကို Self-လေးစားမှုနှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာစေပါတယ်။
ရပ်ရွာထဲတွင်ဆက်နေရန်သားသမီးများ၏စနစ်တကျလိုက်လျောညီထွေဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူမိမိတို့၏အဆက်အသွယ်နှင့်သူငယ်တန်းအတွက်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာကစတင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဖို့သူငယ်၏စေတနာ၏ပုံမှန်အစည်းအဝေးလူမှုဆက်ဆံရေးအဆင့်ကိုအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာသည်မှတဆင့်များနှင့်7နှစ်ကျေနပ်စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်:
အောင်မြင်သောလေ့ကျင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှတံခါးသော့ကို - အသစ်တခုအတွေ့အကြုံ, အသိပညာရဖို့ကလျှောက်ထားရန်ဆန္ဒ။ ကြောငျးအတှကျသားသမီးရဲ့စေတနာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေအရသိရသည်အကဲဖြတ်သည်။ ပျြောရှငျတဲ့ပထမဦးဆုံးအ-တနျးဖြစ်လာဖို့, ကလေးသင့်:
ကနဦးအင်တာဗျူးရန်ဖိတ်ခေါ်သားသမီးများ၏အသိပညာများနေ့အကြိုတွင်။ ဒါဟာဆရာမလေးတွေနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့အားသာချက်ထွက်ရှာနှင့်ကျောင်းအဘို့သင့်ကလေး၏အသငျ့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့မိဘများတန်ဖိုးရှိသောအကြံပေးချက်များပေးပါ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများညွှန်းကိန်းတစ်ခုအရေအတွက်ခန့်မှန်းသည်:
ကျောင်းကရန်သူငယ်၏စေတနာစစ်ဆေးအခြေခံပညာကြိုတင်ရလဒ်များ သိ. အတွက်မိဘများစိတ်ဝင်စားပါကအိမ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အလွယ်ကူဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်:
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆွဲပါ။ အဆိုပါပုံရိပ်အခွားနှင့်အသေးစိတ်, အချိုးကျဖြစ်ရပါမည်။
တံဆိပ်ကူးယူပါ။ ကလေးကပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းစွာရေးသားဖို့တတ်နိုင်သည်မဟုတ်ရင်တောင်သူက "srisovat" အက္ခရာများနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုတခုကိုယ်စားပြုသည်။ အလားတူပဲ, ကျောက်စာ, ကလေးအတိအကျကိုက်ညီဒြပ်စင်များ၏အရေအတွက်နီးပါးတူညီ image ကိုပြန်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်မူကြိုအဆိုပါလမ်းလျှောက်အပေါ်ပြုမူတူသောဂရုတစိုက်ကြည့်ရှု - အဆွေဖြစ်ကြ၏ဖြစ်စေ, အခြားကလေးများနှင့်အတူအပေးအယူလုပ်ပါ။
အဆိုပါရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုဖို့ကလေး၏စပ်လျဉ်းလေ့လာပါ။ အမိန့်လိုက်နာလျှင်ဒုတိယအနေအထား seating ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ?
ကလေးတစ်ဦးအဖွဲ့သည်ဂိမ်းငှေပါ။ ဒီဂိမ်းကိုယူသောအရာကိုအနေအထား, သူအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မျှကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
0 င်ကနေ 10 Count ။
တစ်စတုရန်း, တုတ် (မီးခြစ်) ၏ဖန်ဆင်းတဲ့တြိဂံအထဲကအိပ်လေ၏။
အချို့သတ်မှတ်ချက် (အရောင်, ဦးတည်ရာကို, အရွယ်အစား) အရအရာဝတ္ထုခွဲခြား။
နာမ်ဖို့ခြေစစ်ပွဲနာမဝိသေသနတက် Pick ။
သူကသင်ယူဖို့ရန် (နှင့်အဘယ်ကြောင့်) လိုလားလျှင်,
ကလေးအမျိုးအစားအသိပညာကိုလက်ခံရရှိရန်ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးတနျးဖြစ်လာချင်မပါဘူးဆိုရင်ဒါတွေကအခက်အခဲပေါ်ထွန်း။ ပင်ဉာဏ, လူမှုရေးနှင့်ကလေးသူငယ်အခမျှမလှုံ့ဆျောမှုရှိပါတယ်သည့်အခါဆုံးရှုံးအရေးပါမှုကျောင်းများအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုစေတနာ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, ကထွက်ရှာရန်အရေးကြီးပါသည်မိဘများအဘယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုလည်းမရှိ။
ပြဿနာတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားအဓိကအားဖြင့်ကျောင်းသို့မသွားမီကလေးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတည်ရှိသည်။ မကြာခဏကလေးကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခဏအနုတ်လက္ခဏာထုတ်ပြန်ချက်များဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ကျောင်းကိုမသွားချင်ပါဘူး။ အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်မြွက်ယင်းစာပိုဒ်တိုများအချို့ကိုလေ့လာမှု၏တင်ပြချက်အပေါ် memory နဲ့မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုများတွင်အပ်နှံကြသည်:
အဆိုပါကလေးသည်ကျောင်းကအဆင်သင့်မဖြစ် - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ပဏာမစမ်းသပ်မှု, ပထမဦးဆုံးတန်းမှဝန်ခံချက်များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအသိပညာ၏လိုအပ်သောအဆင့်မရှိခြင်းကိုပြသကြလျှင်, သင်ချက်ချင်းသည်ဤအခက်အခဲများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စတင်သင့်ပါတယ်။ မဆိုတည်ဆဲပြဿနာများကျောင်းပညာရေးကိုတုပ, ကလေးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသင်ခန်းစာများမှတဆင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဆရာ, ဆရာမများနှင့်သားသမီးရဲ့ကုသရန်အကြံပြု:
အမြဲတမ်းရန်ကလေးတစ်ဦးကိုဆုံးမသွန်သင် သောနေ့ရက်ကာလကိုများစွာစစ်အစိုးရကို ။
မကြာခဏဆိုသလိုအခြားသူများနှင့် (အဆိုး) ကိုနှိုင်းယှဉ်ပျက်ကွက်စစ်ကြောတော်မူလျက်နှင့်မ, မချီးမွမ်းရ။
Self-မှီခို, တစ်ဦးချင်းတာဝန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (အကြောင်းပြချက်အတွင်း) action ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသညျ။
အရေးအသားနှင့်ပုံဆွဲဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်း Buy ။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို Workstation (စားပွဲခုံသို့မဟုတ်စားပွဲ, ကုလားထိုင်) Organize ။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်, (စသည်တို့ကိုစိတ်ပညာရှင်, ကုထုံး,) အထူးကုကျဉ်းမြောင်းရည်ညွှန်း။
သူငယ်၏ရပိုင်ခွင့်များ - ကလေးများအားလုံးအခွင့်အရေး
45 အမြိုးသမီးမြားပြီးနောက်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး - မူးယစ်ဆေးဝါးများ
Mastoiditis - ဝိသေသလက္ခဏာများ, ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ကုသ, ဟောကိန်း
အက်ရှလေ Olsen နေမကောင်းဖြစ်သနည်း
အက်ရှလေ Benson နှင့် Tyler ဘလက်ဘန်း
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ syncytial ရောဂါကူးစက်မှု - ရောဂါပိုးအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ပြဿနာများတားဆီးဖို့ဘယ်လို?
ခေတ်မီစတိုင် loggia ဒီဇိုင်း
Levomekol ကြည်ညို - လျှောက်လွှာ
အဆိုပါစားဆင်ယင် code ကိုအနက်ရောင်လည်စည်းဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်, Mark ယောနသန်သည် Barbie လိင် dolls စေသည်!